Farqiga U Dhexeeya Teknolojiyada Suuqgeynta? | Martech Zone
In badan, sannado badan ka hor waxaan falanqeeye ka ahaa Wargeyska. Toddobaad kasta waxaan ka soo ururiyey xog-ururin ku saabsan dhammaan nidaamkeenna wax-soo-saar iyo qaybinta waxaanan ka shaqeyn jiray sidii aan u heli lahaa meesha ay jirto waqti ama lacag lagu kaydin karo. Waxay ahayd shaqo dhib badan laakiin waxaan lahaa hoggaan wanaagsan sannadihii tobanka sano ahaa ee aan ka shaqeynayayna, waxaan yareynay miisaaniyaddeenna howlgalka sannad walba.
Waxay ahayd shaqo aan caadi ahayn oo lagu abaalmariyo. Anigu shaqsiyan mas'uul baan ka ahaa miisaaniyad malaayiin doolar ah - markaa helitaanka qashinka si fudud uma oggolaan shirkadda inay lacag keydiso, waxay kaloo ii oggolaatay inaan lacag ku bixiyo meeshii loogu baahnaa. Waxay ahayd wax lagu qanco in la siiyo shaqaalaha aaladaha iyo teknoolojiyada ay u baahan yihiin si ay noloshooda ugu fududaato.
Ka helitaanka fursad nidaamka ayaa markasta noo horseeday xiriir nidaamka, laakiin kuma jiro howlaha kala duwan ee laftooda. Habeenada badankood, saxaafaduhu sifiican ayey u socdeen, qalabka galinta wax qalad ah maleh, gawaarida waa hagaagsanaayeen, kuwa xambaarana si adag ayey u shaqeeyeen si ay warqada ugu soo gaadhaan albaabkaaga. Intii u dhexeysey, in kastoo, gaadiidleydii ay ciriiri galeen, xarriiqyadiina ay ku fashilmeen, baallayaasha ayaa hoos u dhacay, kuwa xamuulka qaada ayaa fashilmay, taraafikada ayaa joojisay kuwa qaada.
Iyadoo dhowr iyo toban sano oo marketing Falanqaynta hadda gadaashayda, fursadaha isma beddelin. Shaqadayda, boggaggu si fiican ayey u shaqeeyaan, joornaaladayaashu way soo baxaan okay, the Analytics waa hagaagsan tahay, balooggu wuxuu sameynayaa wax cajiib ah, wicitaanada-ficilka ayaa la riixayaa, hogaamiyayaashana waxaa lagu darayaa Salesforce.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan qodobbada isku xirka inta u dhexeysa ayaa ka dhiman. Wargeysku lama mid ahaanayo bogga iyo Analytics. The Analytics qabsado ugu tirooyinka, laakiin ma ahan qaar ka mid ah macluumaadka muhiimka ah ee laga helo bogga ama baloogga. Balooggu wuxuu soo jiitaa taraafiko badan, laakiin raad raaca dadka ka socda baloogga ilaa goobta shirkadaha way lumeen. Gudaha Salesforce, kuma raad-joogno ereyada muhiimka ah ee keenay, maqaallada ay akhriyaan, iyo CTA ay riixeen. Xidhiidhada ayaa jabay.
Iyaguna ma fududa in la saxo!
Kooxdayada Suuqgeynta waxay ogyihiin waxa loo baahan yahay in la qabto, waxay si fudud u la'yihiin ilaha ay ku heli karaan dhammaantood si habsami leh u shaqeynaya hadda. Ma aaminsani in tani ay kaga duwan tahay shirkad kale… dhamaanteen waxaan la halgameynaa waxqabad la aan sababtoo ah sida nidaamyadeenu isugu milmaan una otomatigeeyaan. Waxay ahayd hamigeyga sanado badan, laakiin ma hubo in wax horumar ah oo waaweyn ay ku soo kordheen suuqa.
Markaan fiirinayo mustaqbalka Teknolojiyada Suuqgeynta, ma aaminsani in fursadaha ay ku dhexjiraan dhex dhexaadiyaasha themselves Waxaan aaminsanahay inay ku jiifsadaan xiriirka ka dhexeeya.
Tags: khariidaynta feejignaantagooldhalintasuuq u dhowaanshaha
Jun 16, 2009 saacadu markay ahayd 12:42 AM
Ok waad igu dhacday, laba xisaabood. Marka hore, ma muhiim baa in la tiriyo? Kawaran hadaad uun sameysay waxaad sameysay oo aadan cabiri jirin, weli miyaa la xisaabayaa? Marka labaad, waxaan ku xayiray “Salesforce” sidaa darteed waxaan ku xisaabtami doonaa midkaas out
Jun 16, 2009 saacadu markay ahayd 8:52 AM
Haddii aynaan tirin, sidee ku ogaan karnaa inay shaqadeenna waxtar u leedahay? Re: Salesforce - waa barnaamij adeeg (khadka tooska ah) maareeyaha xiriirka macaamiisha (CRM). Asal ahaan, waad la socon kartaa raadadka iyo macaamiisha, goob kasta oo taabasho iyaga la ah, fursado, iwm Urur loogu talagalay waaxyo badan ama macaamiil aad u tiro badan oo aadan xusuusan karin, CRM waa muhiim si aad u wada yeelan karto dhammaan macaamiisha taariikhaha farahaaga.
Waan ku faraxsanahay inaad i weydiisay! Mararka qaarkood wax yar ayaan halkan ku helayaa ky